अब म कसैलाई बाँकी राख्दिनँ भन्दै लोकमानले जारी गरे खतरनाक विज्ञप्ति ! – Complete Nepali News Portal
नायिका सुष्मा कार्कीले अर्की नायिका पुजा शर्मालाई एती सम्म नराम्रो भनेपछि(हेर्नुहोस)
अब म कसैलाई बाँकी राख्दिनँ भन्दै लोकमानले जारी गरे खतरनाक विज्ञप्ति !
December 23, 2016	1,179 Views
कतिको शरीरमा वस्त्र बाँकी रहला समयले नै बताउने भन्दै लोकमान
अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की महाभियोगबारे मुख खोलेका छन् । अदातलमा कार्की विरुद्ध कालोमोसो सहित भएको आक्रमण लगत्तै कार्कीले अपिल जारी गर्दै महाभियोगबारे बोलेका हुन् ।
उनले आफूसँग धेरै तथ्यपूर्ण रहस्यका पोकाहरु रहेकोले जनताले चाहेको र देशले मागेको उपयुक्त समयमा सम्पूर्ण तथ्य विवरण जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न नहिचकिचाउने अपिलमा उल्लेख चेतावनी दिएका छन् ।
उनले कतिको शरीरमा वस्त्र बाँकी रहला समयले नै बताउने भन्दै धम्किपूर्ण भाषामा लामो अपिल जारी गरेका हुन् ।
उनले जारी गरेको अपिल यस्तो छ
७ पुष २०७३